यस्तो नर्सिङ होम, जहाँ छोरी जन्माउने दम्पतीले तिर्नुपर्दैन शुल्क - Kendrabindu Nepal Online News
यस्तो नर्सिङ होम, जहाँ छोरी जन्माउने दम्पतीले तिर्नुपर्दैन शुल्क
अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय, लाइफ स्टाइल, समाचार, समाज, स्वास्थ्य
एजेन्सी । तपाई हाम्रो ठाउँका अस्पतालमा सुत्केरी हुँदा महंगो शुल्क तिर्नुपर्छ । सरकारी बाहेक जुनसुकै निजी हस्पिटलमा सुत्केरी हुँदा महंगो शुल्क तिर्दै आएका छौं । भारतको एक निजी नर्सिङ होमले छोरी जन्माउने दम्पतीलाई कुनै शुल्क लिदैंन् । बरु खुशियालीमा अस्पतालले नै मिठाइ बाँड्छ ।
वाराणसीको पहाडी इलाकामा रहेको धर नर्सिङ होमले छोरी जन्माउने जन्माने दम्पतिबाट कुनै शुल्क लिदैन् । नर्सिङ होमकी सञ्चालिका डा. शिप्राधर श्रीवास्तवले यस्तो गर्दै आएकी हुन् । उनको अस्पतालमा डेलिभरी गर्न आएका महिलाले छोरी जन्माए भने शुल्क मात्रै लिन्नन्, उनीहरुलाई मिठाइ किनेर समेत बाँड्ने गरेकी छन्।
भ्रूण हत्या र छोरीको जन्मलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो गर्दै आएकी उनी बताउँछिन्। उनको यो कदमले डेलिभरी गर्न गएका परिवार नै छक्क पर्ने गरेका छन्। ‘किन शुल्क नलिएको ?’ जवाफमा डा. श्रीवास्तव भन्छिन्, ‘मानिसमा छोरीप्रति अहिले पनि नकारात्मक सोच छ। यो सोच बदल्न म यो प्रयास गरिरहेकी छु, म चाहन्छु छोरा हुन् या छोरी अबोध शिशुलाई मानिसले खुशीले अपनाउन्।’ उनको नर्सिङ होममा अहिलेसम्म १०० छोरीले जन्म लिइसकेका छन्।
कुनै छोरीका बाबुआमासँग पनि उनले शुल्क लिएकी छैनन्। यति मात्र होइन शिप्राधरले गरिब परिवारकी छोरीहरूको शिक्षाको जिम्मेवारी पनि लिएकी छिन्। यो कार्यमा उनलाई श्रीमान् डा. मनोजकुमार श्रीवास्तवले पनि साथ दिएका छन्।
यो खबर सुनेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि खुशी भए र उनको नर्सिङ होममा पुगे। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रत्येक महिनाको ९ तारिखमा जन्म लिने हरेक छोरीको परिवारसँग कुनै किसिमको शुल्क नलिन सबै अस्पताललाई आह्वान गरेका छन्।